ဒေါက်တာခင်ဗျာ အခုပို့ပေးလိုက်တဲ့ ပုံတွေက မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါသည် ကလေးငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမှသာ ဆေးရုံတက်ရ
May 13th, 12:37am
ဒေါက်တာခင်ဗျာ အခုပို့ပေးလိုက်တဲ့ ပုံတွေက မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါသည် ကလေးငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမှသာ ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသရင်း CT ရိုက်ကြည့်ရာမှ နှလုံးအဆို့ရှင်နှင့်ပါတ်သက်ပြီး ရောဂါခံစားနေရသည်ကို တွေ့မြင်နေရပါသည်။ ရန်ကုန်ကလေးဆေးရုံကြီး (ရန်ကင်း) သို့ တက်ရောက်ခွဲစိတ်ကုသရန် ပြောပါသည်။ ယခုလို ခွဲစိတ်ကုသရန် မိဘများအနေဖြင့် ငွေကြေးမတတ်နိုင်ကြပါ။ မည်သို့ ပြုလုပ်ရမည်ကို အကြံပေးစေလိုပါသည်။
မေးခွန်းပါစာရွက်ထဲမှာ ASD မွေးရာပါနှလုံးရောဂါ တခုနဲ့ ရူမက်တစ်အဆိုရှင့် MR (မိုက်ထရယ် မလုံ) တာ နှစ်မျိုး ရှိနေတယ်။ ခွဲစိတ်နည်းသာရှိတယ်။ ဆောရီး။
အသုံးအနှုန်းမတူတာလေးတွေရှိတယ်။ MR လို့မြန်မာပြည်ကခေါ်တာကို Mayo Clinic က Mitral valve regurgitation လို့ခေါ်တယ်။ ဘယ်ဘယ်ခြင်း (မိုက်ထရယ်) အဆို့ရှင် အဆို့ရှင်မလုံတာဖြစ်တယ်။ နှလုံးညှစ်တိုင်း ရှေ့ကိုသာသွားရမယ့် သွေးက နောက်လည်းပြန်လာနေတယ်။ မကုသရင် ကြာတော့ နှလုံးကြွက်သားတွေပျက်စီးလာမယ်။ သွေးမလုံတာ အများဆုံးဖြစ်တဲ့ နောက်တမျိုးက mitral valve prolapsed မိုက်ထရယ်အဆို့ရှင်ကျွံတာဖြစ်တယ်။ နောက်တမျိုးက Mitral valve stenosis မိုက်ထရယ်အဆို့ရှင်ကျဉ်းတာဖြစ်တယ်။ အဆို့ရှင်အဖတ်လေးတွေက ထုပြီးတင်းမာနေလို့ဖြစ်တယ်။ တခုနဲ့တခုထိစပ်ကပ်မနေနိုင်ဘူး။
1. Cardiac dysrhythmias နှလုံးခုန်မမှန်ရောဂါ၊
2. Cardiomyopathy နှလုံးကြွက်သားရောဂါ၊
3. Cor pulmonale နှလုံးဘညာဘက်ခြမ်း အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း၊
4. Coronary heart disease (ischaemic heart disease) နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊
5. Heart failure နှလုံးအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့ရောဂါ၊
6. Hypertensive heart disease သွေးတိုး-နှလုံးရောဂါ၊
7. Inflammatory heart disease နှလုံးရောင်ရောဂါများ၊ (Endocarditis နှလုံးအတွင်းပိုင်းရောင်ခြင်း၊ Inflammatory cardiomegaly နှလုံးရောင်ခြင်း၊ Myocarditis နှလုံးကြွက်သားရောင်ခြင်း၊)
8. Peripheral arterial disease အဖျားအနားသွေးကြောရောဂါ။
9. Stroke and cerebrovascular disease ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါ၊
10. Valvular heart disease နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါများ၊
Atrial septal defect (ASD) ဆိုတာ နှလုံး အပေါ်ပိုင်း ဘယ်ဖက်ခြမ်းနဲ့ ညာဖက်ခြမ်းကြားမှာ အပေါက်ဖြစ်နေတာ။
အပေ်က်ကြီးလေဆိုလေ။ သေးသေးလေးဆိုရင် နေနိုင်သေးတယ်။ ကြာရင်တော့ နှလုံးအလုပ်မနိုင်တာ၊ အဆုပ်သွေးတိုးတာတွေ ဆက်ဖြစ်မယ်။ ခွဲစိတ်ကုသသမှရတယ်။ အသက်ရှူမဝ။ အားယုတ်။ ခြေလက်ဗိုက်ရောင်။ ရင်တုန်။ အဆုပ်ပိုးဝင်။ (ဆထုပ်)။ နှလုံးအသံမမှန်တွေဖြစ်မယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်က Rubella infection ခေါ် ဂျာမန်ဝက်သက်ရောဂါရှိခဲံသူတွေမျာဖြစ်နိုင်တယ်။ အရက်၊ မူးယစ်ဆေး၊ ဆေးလိပ်၊ ဆီးချိုကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ တိတိကျကျတော့ဘာလို့ဖြစ်သလည်း မပြောနိုင်ပါ။
ဆေးတွေတော့ပေးရတယ်။ အပေါက်ပိတ်စေအောင်တော့ဆေးတွေကမလုပ်နိုင်ပါ။ နှလုံးခုန်မမမြန်အောင် beta blockers ဆေးပေးမယ်။ (ဆထုပ်) မရအောင် anticoagulants သွေးမခဲဆေးပေးမယ်။ ခွဲစိတ်တာကို ငယ်ကတည်းက လုပ်သင့်တယ်။
ဆက်လက်ပြသ-ကုသစရာလိုတယ်။ ခွဲစိတ်ပြီးနောက် တချို့ကို လနဲ့ချီပြီး သွေးမတိတ်ဆေး ပေးရတယ်။ ၆ လထက်တော့ မပိုပါ။ စစ်ဆေးတာလဲလုပ်ရနိုင်တယ်။ ဥပမာ electrocardiograms, Holter monitors, exercise stress tests and echocardiograms တွေဖြစ်တယ်။ cardiac catheterization ကိုတော့ လုပ်ရတာရှားတယ်။
ကိုယ်လက်လှုတ်ရှားမှုကန့်သတ်ခြင်းကို လူတိုင်းအတွက်မလုပ်စေပါ။ တချို့ကို အချိန်ကန့်သတ်ပြီး သက်တောင့်သက်သာ နေစေတယ်။ ဒိနောက်တော့ သူများလိုနေနိုင်လုပ်နိုင်ပြီ။ အမျိုးသမီးမှာဖြစ်နေရင် အခြေအနေတွေပုံမှန်ဖြစ်တာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်လို့ရပါတယ်။ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မထားသူဆိုရင်တော့ နှလုံးကို ထိခိုက်နိုင်တယ်။
Credit Source: https://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/asd-2.html
DrTintSwe ASD 508 Views
ASCUS Pap abnormality သားအိမ်ဝစစ်ချက် ပုံမှန်မထွက်
HIV and CD4 စီ-ဒီ-ဖိုး
Penis Injection Risks ကျားအင်္ဂါဆေးထိုးတဲ့ အန္တရာယ်တွေ